Proverbe Akoho tokana anaka: avy sasaka vao halan-tompo. [Cousins 1885 #51]
Proverbe Amboalahy koro, ka manala voninahitra ny tompony. [Veyrières 1913 #747, Cousins 1885 #135]
Proverbe Ankadivory masiaka amboa : mandany zara ny tompony. [Rinara 1974 #270, Cousins 1885 #239]
Proverbe Aza atao tompony mangataka atiny. [Veyrières 1913 #278, Cousins 1885 #367]
Proverbe Aza dia atao fatra-pandefitra toy ny mpivaro-tantely : ny tompony indray no milela-tanana. [Cousins 1885 #376]
Proverbe Aza manao varo-tako-dRainitsilombonina: ny tompony indray no mifandrombaka. [Cousins 1885 #542]
Proverbe Aza mivolon-ko tompony. [Cousins 1885 #684]
Proverbe Aza saronam-bava toy ny vilany aho, fa aoka hanaja ny tompony toy ny seza. [Veyrières 1913 #758, Cousins 1885 #705]
Proverbe Fehitendan’ ny mpihaingo, ka izy tompony ihany no kendainy. [Nicol 1935 #261, Cousins 1885]
Proverbe Lakan' Ambaravarambato : mandrendrika ny tompony. [Veyrières 1913 #6283, Rinara 1974 #1684, Cousins 1885 #1299]
Proverbe Mindram-pangady lohataona, ka maniraka ny tompony hanao. [Cousins 1885 #1796, Nicol 1935 #60]
Proverbe Miraharaha, tsy tompon' ny trano; mitoetra ihany, olon-koman-kanina. [Cousins 1885]
Proverbe Mpanan-karena mahihitra : tsy tompony, fa mitahiry. [Veyrières 1913 #2312, Cousins 1885 #1959]
Proverbe Mpiandry omby volavita : tsy tompony, fa mpamerin-doha. [Veyrières 1913 #3413, Rinara 1974 #2609, Cousins 1885 #1981, Houlder 1895, Rajemisa 1985]
Proverbe Ny aina tsy afaky ny tompony. [Cousins 1885 #2127, Nicol 1935 #469]
Proverbe Ny takatra no mahavita trano, ka ny vorondolo no mibohy. [Cousins 1885 #2424]
Proverbe Ny tompom-pasana indray no atao an-iritra. [Veyrières 1913 #2231, Rinara 1974 #3310, Cousins 1885 #2510]
Proverbe Ny tompon' alahelo leo ihany, fa ny mpamendrofendro no tsy tanty. [Houlder 1895 #1027, Veyrières 1913 #2911, Cousins 1885]
Proverbe Raha mpanan-karena tsy mihinana : tsy tompony fa mpiandry entana. [Cousins 1885 #2700, Nicol 1935 #3]
Proverbe Sompanga momba valala : lehibe, fa tsy tompon' ny dia. [Veyrières 1913 #2110, Cousins 1885 #2932]
Proverbe Toy ny sotrobe : fialo, fa tsy tompon’ ny teny. [Veyrières 1913 #3432, Cousins 1885 #3227]
Proverbe Tompony mba mihono, toa zanak’ anabavy. [Cousins 1885 #3121]
Proverbe Tseroka an-tava iaraha-mahita, fa raha tsy ny tompony tsy mahafaka azy. [Rinara 1974 #4417, Cousins 1885 #3292, Veyrières 1913]
Proverbe Tsy misy tsy mangala-katsaka, fa izay mipiaka mahery ihany no ren' ny tompony. [Cousins 1885, Rinara 1974]
Proverbe Valalanamboa : ny tompony aza tsy tia. [Cousins 1885 #3602]
Proverbe Voasary amoron-dalana : haka aho tsy tompony, hitoetra ihany maha-te-hihinana. [Veyrières 1913 #5838, Cousins 1885, Rinara 1974]